Xoghayihii Joogtada Wasaaradda Gargaarka Somaliya Oo Is casilay. | Awdalmedia.com
Xoghayihii Joogtada Wasaaradda Gargaarka Somaliya Oo Is casilay.
Xoghayihii Joogtada wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Maxamed Cumar Macalin ayaa iska casilay xilkii uu ka hayay Wasaaraddaas, iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan qaabka uu isku casilay.
Sida wararku sheegayaan Xoghayaha ayaa sababaha uu isku casilay ku sheegay duruufo adag oo u saamixi waayay, kuna sii wato shaqadii uu hayay, balse ma aanu sheegin duruufahaas.
Wararka qaar ayaa sheegaya in is casilaadiisa ay la xiriirto kiis dhowaan ka dhacay Wasaaradda Gargaarka oo lagu xiray Agaasime waaxeedka Dib u dejinta Barakacayaasha Daahir Maxamed Nuur, kaasoo lagu soo eedeeyay xatooyo xoolo dadweyne.
Kiiska Xarigga Agaasime waaxeedka ayaa gaaray heer Maxkamadeed, isagoo haatan ku jira Xabsi, waxaana Maxkamdda Gobolka Banaadir oo la horkeenay ay amartay in la soo xiro saraakiishii ka dambeysay xariga oo lagu eedeeyay in aanay u marin xariggiisa hab sharciga waafaqsan, waxaana markii saraakiisha la xiray kiiskooda soo fara geliyay Madaxda dowladda oo amarkooda lagu soo daayay.